Tsika Yemakwikwi Mhete uye Kirasi Kiringi, Tsika Mhete Vagadziri | Byer Zvishongo
Zvishongo zveBerere ndiyo yakanakisa tsika mhete vagadziri.Tinogamuchirwa kushanyira fekitori yedu.
Mari yezvikamu Byer Jewelle Holdings Limited ndiyo yakanakisa fekitori yezvishongo muChina, isu takasarudzika mukugadzira mhete kugadzira. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira zvetsika Championship Ring, Kirin'i Kirasi, Mhete yeMasoja, Chindori Mhete uye Mason Mhete. Kupa Tsika Zvishongo Zvishongo, futi .Bata nesu.
Tsika Yemakwikwi Mhete
Vagadziri vedu vane hunyanzvi vanogona kugadzira mifananidzo yemahara ye3D sezvikumbiro zvevatengi mukati memaawa gumi nemaviri uye nekuchinja nguva. Tsika dzakasiyana zita rekutamba, nhamba uye chinzvimbo zviripo kwatiri. Isuwo tinogona kugadzirisa matombo mumhando dzakasiyana uye mavara.
Tsika Kirasi Mhete
Uri kutsvaga iwe chindori chako kana rako timu Tinogona kukubatsira iwe acheive izvo. Yedu nyanzvi dhizaini timu ichashanda newe kugadzira chidimbu cheunyanzvi. Unogona kugadzirisa zita rechikoro, zita remudzidzi uye gore rekupedza mhete parin'i.
Tsika Yemauto Mhete yevarume
Mucherechedzo wekubwinya uye kugona kwechikwata chako, huya ugadzire yakasarudzika mhete nesu Iwe unogona kuve neyako logo pairi.
Tsika Yemhete Yemhete
Uri kutsvaga izvozvi kuzviisa pachikwata chako? Wecanhelpyouacheivethat. Ourexpert designteamwillworkwithyoutocreatapieceofart. Youcancustomizename, yearandspeciallogoonthering.
How Kuti Order?
Kana iwe uchitsvaga mhete iwe kana rakakosha timu, isu takuwana iwe wakafukidzwa. Yedu nyanzvi 3D dhizaini timu inoshanda pamwe newe kugadzira yakakosha dhizaini yako.
1. Sarudza template imwe.
2. Titumirei marogo enyu uye mutizivise kwamunoda kuisa marogo acho.
3. Tinogona kukuita iwe 3D dhizaini.
4. Tumira iwe inivhoyisi mushure mekusimbisa dhizaini.
5. Kugadzira mushure mekubhadhara.
6. Yakakosha Tsika Sevhisi
Yakagadzwa muna 2006, ByerJew jewelry ndiyo inotungamira inogadzira yetsika yakagadzira zvishongo dhizaini, kugadzira uye kutengesa muChina. Zvigadzirwa zvepamusoro zvinosanganisira maringi eChampionship, zvindori zveMasoja, zvindori zveMason, Mhete dzeKambani uye zvichingodaro.Custom zita rekutamba rakasiyana, nhamba uye chinzvimbo chinowanikwa kwatiri. Nesuwo tinogona gadzirisa matombo mumhando dzakasiyana uye mavara.
Tine pachedu nyanzvi fekitari
Fekitori yedu inoburitsa rin'i yemakwikwi, rin'i yekirasi uye zvichingodaro
Tine nyanzvi 3Ddesign timu
Vagadziri vedu vanogona kupa emahara 3d mifananidzo mukati maawa mana yekusimbiswa kwevatengi.
Isu tinogamuchira yakasarudzika maitiro
Mhete dzedu dzinogona kuve dzakagadziriswa dzakasiyana mutambi zita, Kwete POS, uye akakosha matombo.
Tinogona kuita shanduko yakasarudzika kana iwe uri kukanganisa
Tsika yemutambi zita, Kwete POS., Saizi yeminwe, kunyora kwakashata, tinogona kuzvigadzirisa
Professional 3D Dhizaina timu.
Yakagadzwa muna 2006, Byer Zvishongo Zvishongo ndiyo inotungamira inogadzira tsika yakagadzirwa nezvishongo, kugadzirwa uye kutengesa muChina, Main zvigadzirwa zvinosanganisira Championship zvindori, Mauto zvindori, Class mhete, Masonic mhete, Kambani mhete uye zvichingodaro. Main zvinhu: 18K, 14K, 10K goridhe, sirivheri, ndarira, Stainless simbi, chiwanikwa, Unogona kusarudza CZ ibwe, nedhaimani, chakagadzirwa ibwe.
Yedu nyanzvi dhizaini timu inogona dhizaina yemahara 3D mifananidzo pamutengi kukumbira mukati maawa gumi nemaviri uye kuita shanduko yekusimbiswa kwevatengi. Mhizha dzedu dzine hunyanzvi dzinogona kuita rakasiyana ZITA, Nhamba, POS, akakosha matombo echimiro, pantone ruvara enamel nezvimwe zvemhete imwe maererano nezvinodiwa nevatengi. Isu tinewo QA yehunyanzvi, QC timu uye takaita zvakadzama QC zviyero, yega yega mhete yakatariswa imwe neimwe kuona yepamusoro mhando isati yatumirwa, uye kugutsa vatengi vese.
Ingo siya email yako kana nhamba yefoni mufomu rekubatana kuitira kuti tikutumire yemahara kota kune edu akasiyana siyana magadzirirwo!